DEG DEG: Zidane oo iska casilay shaqadda Real Madrid – Radio Muqdisho
DEG DEG: Zidane oo iska casilay shaqadda Real Madrid
Real Madrid ayaa leyliyehiidii Zidane, waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka tababarnimo.
Ninka reer France ayaa helay seddex mar oo xiriir ah koobka Champions Leaguem, waxa kale uu ku guulleystay horyaalka Spain ee La Liga.
Zidane ayaa wax badan ku faahfaahiyay shir jaraa’id uu qabtay maanta oo Khamiis ah.
“Kooxda waxa ay u baahan tahay inay sii wadato guullaheeda, waxa ay u baahan tahay isbeddel, aniga waan jeclahay kooxdan, madaxweynaheedda waxa uu isiiyay fursad aan ku maamulo kooxdii aan u soo ciyaaray taasna waxa ay aheyd riyadeyda, waxaan oggaaday in isbeddel loo baahan yahay taas ayaana keentay inaan qaato go’aanka is-casilaadda.” Zidane ayaa sidan u sheegay wariyayaasha.
Madaxweynaha kooxda cad cadka Florentino Perez oo ka hadlay go’aanka 45-sanno jirka ayaa waxa uu yiri: “Waa go’aan aan la qaadan karin, waa maalin ay u xun tahay qof walba oo kooxdan ka shaqeeyo, waan aqbalnay ugu dambeyn go’aankaasi.”
Zidane ayaa xilkan tababarnimo waxa uu la wareeggay bishii January sannadkii 2016.
Wasiirka cusub ee Warfaafinta oo maanta soo gaaray Muqdisho+sawirro